အပေါင်းအဖေါ်များ - Tianse
၏ကမ္ဘာ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအဖြစ် ပုံနှိပ်ခြင်းကမြား နှင့် ရုံးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ , ငါတို့အရှိဆုံး updated, သက်ဆိုင်ရာရုံးထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေး၌ကြီးသောမာနထောင်လွှားယူပါ။ Office ကိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်စည်းဝေးဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့အစဉ်အမြဲကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအေးဂျင့်များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထွက်ရှာကြ၏။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သငျသညျ TIANSE မိသားစု၌အကြှနျုပျတို့၏အင်္ဂါတခုဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့် ပို. အောင်မြင်မှုရအောင်မြင်ရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြပါစို့
စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပိုမိုထက် 10 နှစ် '' အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအာရုံစိုက်နှင့်ကွဲပြားခြားနား series နှင့်စတိုင်များအတွက်ပုံနှိပ်ခြင်းကမြားနှငျ့ရုံးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများများ၏အကျယ်ဆုံးအကွာအဝေးဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။
တင်းကျပ်သော QC လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တိကျခိုင်မာစွာ In-အိမ်သူအိမ်သားစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်ကိုသာနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှစျေးနှုန်းများနှင့်အတူအမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံရရှိစေရန်ဓမ္မကတိကပါစေ။
ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းတရုတ်တွင် 10000 စတုရန်းမီတာမှစုစုပေါင်းဂိုဒေါင်အာကာသတက်နှင့်အတူ Huizhou နှင့်5ကြီးမားတဲ့ဂိုဒေါင်ထဲမှာ 35000 စတုရန်းမီတာဖုံးအုပ်နှင့်တကွ, ဖြန့်ဝေသည့်အဓိကတရုတ်မြို့ကြီးတွေမှာ 48 နာရီအတွင်းအာမခံနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ 193 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများနှင့် 2300 သမဝါယမဆိုင်များတွင်တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်အတူ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖောက်သည်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန် All-န်းကျင်နှင့်စိတ်ကြိုက်န်ဆောင်မှုကိုပေး။
အသိမှတ်ပြု TIANSE အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုး
TIANSE အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်မြင့်မားနှစ်ဦးစလုံးဟာပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဖောက်သည်များကမျက်နှာသာနေကြပြီး, Tmall.com, JD.com နှင့် Amazon ကဲ့သို့အဓိကက e-Commerce ပလက်ဖောင်းအတွက်အလွန်ကောင်းစွာရောင်းချကြပါတယ်, etc လောလောဆယ် TIANSE ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပိုမို 80 အမှတ်တံဆိပ်အေးဂျင့်ရှိပါတယ်။
အပြည့်အဝအမှတ်တံဆိပ် & Models ပံ့ပိုးမှု
Professional ကနည်းပညာပိုင်း & ပြီးနောက်-ရောင်းအားပံ့ပိုးမှု
TIANSE ကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှု, စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာအပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြု; စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုစေရန် TIANSE နှင့်အတူပူးပေါင်းခိုင်မာတဲ့စိတ်အားထက်သန်။
အခုတော့ TIANSE Join!
ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သငျသညျ TIANSE မိသားစု၌အကြှနျုပျတို့၏အင်္ဂါတခုဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ TIANSE သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကို သာ. ကြီးမြတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုနှင့်အသီးအနှံများ Win-Win ရလဒ်များအတွက်အတူတကွတိုက်ဖျက်ရန်ကြပါစို့။